News - hydroxypropyl methylcellulose waxyeello u gaysata jidhka bini’aadamka? Maxaan u fiirsadaa?
Ma hydroxypropyl methylcellulose waxyeello u leh jirka aadanaha? Maxaan fiiro gaar ah u leeyahay?
Daawada hydroxypropyl methylcellulose ma waxyeelo u geysaneysaa jidhka bini’aadamka? Maxaan u fiirsadaa?
Hydroxypropyl methylcellulose waxyeello uma leh jirka bini aadamka, hydroxypropyl methyl cellulose waa mid nabdoon oo aan sun lahayn, waxaa loo isticmaali karaa cunto cuno, ma leh kuleyl, mana leh cuncun cuncunka maqaarka iyo xuubka xuubka. Guud ahaan loo qaddariyo inay tahay badbaado qaadashada maalinlaha ah oo la oggol yahay oo 25mg / kg ah, qalabka ilaalinta waa in la gashado inta lagu jiro hawlgalka.
Haweenka naas nuujinaya ayaa nuujiya inta ay isticmaalayaan daroogada, mana jiraan wax falcelin ah oo aan laga soo sheegin dhallaanka. Sidaa daraadeed, ma jiraan wax uur ka hortag ah oo gaar u ah haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya. Isticmaalka 'hypromellose' ee carruurta ma keento falcelinno ka sii darran marka la barbar dhigo kooxaha da'da kale, sidaa darteed carruurtu waxay u isticmaali karaan badeecadan isla qorshaha dadka waaweyn.
Sifooyinka hydroxypropyl methylcellulose
1. Heerka sare ee polymerization-ka celcellose ether, weynaantiisa culeyska molikaliga, iyo sare ubaxyada ku jira xalka aqueous.
2. Marka sare ee qaadashada (ama feejignaanta) cellulose ether, ay sare u kaco viscosity xalka aqueous. Si kastaba ha noqotee, fiiro gaar ah u yeelo xulashada qaadashada ku habboon inta lagu jiro dalabka si looga fogaado qaadashada xad-dhaafka ah oo aad u saameyso shaqada madaafiic iyo shubka. dabeecad.
3. Sida dareerayaasha badankood, u nuglaanshaha xalka celiyaha celceliska ayaa hoos u dhici doonta iyadoo heerkulku sii kordhayo, isla markaana ay sii kordhayso isku soo ururinta 'cellulose ether', ayaa waxaa sii kordheysa saameynta heerkulka.
4. Hydroxypropyl methylcellulose xal caadi ahaan waa jirka pseudoplastic, kaas oo leh hantida khafiifinta maqaarka. Markay sii weynaato xaddiga xiiriddu inta lagu jiro baaritaanka, hoos ayuu u noqonayaa nafwaayaha. Sidaa darteed, isku-dhafka madaafiicdu wuu yaraan doonaa awoodda dibedda awgood, taas oo ku habboon xoqidda dhismaha madaafiicda, taas oo keeneysa in madaafiicdu ay leedahay wada shaqeyn wanaagsan iyo isku-xirnaan.
Xalka hydroxypropyl methylcellulose wuxuu soo bandhigayaa astaamaha dareeraha Newtonian marka feejignaanta ay aad u yar tahay isla markaana aragtidu ay yar tahay. Markii feejignaanta la kordhiyo, xalka ayaa si tartiib tartiib ah u muujinaya astaamaha dheecaanka pseudoplastic, iyo marka feejignaanta sare la qaado, ayaa si muuqata u muuqanaysa cilladda pseudoplasticity.